ဗိုက်ကြီးသည်တစ်ယောက်ရဲ့ ပုံစံလိုမျိုးလုပ်ကာ မြူးကြွတဲ့သံစဉ်တွေနဲ့ ခုန်ပေါက်ကခုန်နေတဲ့ ဖြူဖြူထွေးရဲ့ ဗီဒီယိုလေး…. – Cele Snap
ဗိုက်ကြီးသည်တစ်ယောက်ရဲ့ ပုံစံလိုမျိုးလုပ်ကာ မြူးကြွတဲ့သံစဉ်တွေနဲ့ ခုန်ပေါက်ကခုန်နေတဲ့ ဖြူဖြူထွေးရဲ့ ဗီဒီယိုလေး….
အခုနောက်ပိုင်း လူမှုကွန်ယက် စာမျက် နှာပေါ်မှာ မသိသူမရှိလောက်အောင် အောင်မြင်မှုတွေရရှိထားတဲ့ ဖြူဖြူထွေးကတော့ နာမည်လေးနဲ့လိုက်အောင် စိတ်သဘောထားကောင်းပြီး အလှူတန်း ရက်ရောသူလေး ဖြစ်ပါတယ်… ။ ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြားကနေ အနုပညာလောကမှာ နေရာတစ်နေရာရရှိအောင် ကြိုးစားခဲ့တဲ့ ဖြူဖြူထွေးက အခုဆိုရင် အားလုံးရဲ့အသိအမှတ်ြ ပုခြင်းခံထားရပြီ ဖြစ်ပါတယ်… ။ မိဘအပေါ်မှာ သိတတ်လိမ္မာတဲ့ ဖြူဖြူထွေးက တစ်နေ့တစ်ြ ခားပိုမိုအောင်မြင် လာတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်…. ။
သူမရရှိတဲ့ အနုပညာကြေးလေးတွေကိုလည်း မကြာခဏဆိုသလို လိုအပ်သူတွေကို တတ်နိုင်သလောက် လှူဒါန်းလေ့ရှိသူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်….။ ဒါ့အပြင် သူမရဲ့ပင်ကိုယ်ဟာသစွမ်းရည်နဲ့ အကဗီဒီယိုလေးတွေကြောင့်လည်း လူမှုကွန်ယက်ဖေ့ဘွတ်စာမျက်နှာပေါ်တွင် ပိုမိုရေပန်းစားလူကြိုက်များလာကာ ပရိသတ် အခိုင်မာရရှိထားတာပါ …။
လတ်တလောမှာလည်း ဗိုက်ကြီးသည်ပုံစံကြီးလုပ်ကာ မြူးကြွတဲ့သံစဉ်တွေနဲ့အပီအပြင်ကခုန်နေတဲ့ ဗီဒီယိုလေးကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးဟာ ရယ်မောရလွန်းတာကြောင့် ကြည့်ရှုသူတွေများပြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူရဲ့ဟာသဗီဒီယိုလေးတွေဟာကြည့်ရှုသူတွေကို အမြဲလိုလို ရယ်မောပျော်ရွှင်ေ စခဲ့တာအမှန်ပါပဲနော် ။ပရိသတ်ကြီးအတွက်ဖြူဖြူေ ထွးရဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါရစေ။
Photo – Phyu Phyu Htwe
အခုနောကျပိုငျး လူမှုကှနျယကျ စာမကျြ နှာပျေါမှာ မသိသူမရှိလောကျအောငျ အောငျမွငျမှုတှရေရှိထားတဲ့ ဖွူဖွူထှေးကတော့ နာမညျလေးနဲ့လိုကျအောငျ စိတျသဘောထားကောငျးပွီး အလှူတနျး ရကျရောသူလေး ဖွဈပါတယျ… ။ ဝဖေနျတိုကျခိုကျမှုတှကွေားကနေ အနုပညာလောကမှာ နရောတဈနရောရရှိအောငျ ကွိုးစားခဲ့တဲ့ ဖွူဖွူထှေးက အခုဆိုရငျ အားလုံးရဲ့အသိအမှတျွ ပုခွငျးခံထားရပွီ ဖွဈပါတယျ… ။ မိဘအပျေါမှာ သိတတျလိမ်မာတဲ့ ဖွူဖွူထှေးက တဈနတေ့ဈွ ခားပိုမိုအောငျမွငျ လာတာလညျး ဖွဈပါတယျ…. ။
သူမရရှိတဲ့ အနုပညာကွေးလေးတှကေိုလညျး မကွာခဏဆိုသလို လိုအပျသူတှကေို တတျနိုငျသလောကျ လှူဒါနျးလရှေိ့သူလေးလညျးဖွဈပါတယျ….။ ဒါ့အပွငျ သူမရဲ့ပငျကိုယျဟာသစှမျးရညျနဲ့ အကဗီဒီယိုလေးတှကွေောငျ့လညျး လူမှုကှနျယကျဖဘှေ့တျစာမကျြနှာပျေါတှငျ ပိုမိုရပေနျးစားလူကွိုကျမြားလာကာ ပရိသတျ အခိုငျမာရရှိထားတာပါ …။
လတျတလောမှာလညျး ဗိုကျကွီးသညျပုံစံကွီးလုပျကာ မွူးကွှတဲ့သံစဉျတှနေဲ့အပီအပွငျကခုနျနတေဲ့ ဗီဒီယိုလေးကိုဖျောပွထားပါတယျ။ဗီဒီယိုလေးဟာ ရယျမောရလှနျးတာကွောငျ့ ကွညျ့ရှုသူတှမြေားပွားခဲ့တာလညျးဖွဈပါတယျ။ သူရဲ့ဟာသဗီဒီယိုလေးတှဟောကွညျ့ရှုသူတှကေို အမွဲလိုလို ရယျမောပြျောရှငျေ စခဲ့တာအမှနျပါပဲနျော ။ပရိသတျကွီးအတှကျဖွူဖွူေ ထှးရဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို မြှဝပေေးလိုကျပါရစေ။
နေမျိုးအောင်တို့က သူမအိမ်မှာထမင်းလာစားမှာဖြစ်လို့ ဖွယ်ဖွယ်ရာရာလေးတွေကို ကိုယ်တိုင်လက်စွမ်းပြပြီး ချက်ပြုတ်နေတဲ့ မေကဗျာရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေး….
ဘဝမှာ အရမ်းခံစားရခက်တဲ့ စိတ်ဒဏ်ရာတွေအများကြီးရှိခဲ့တဲ့အကြောင်း ပြောပြလာခဲ့တဲ့ ချမ်းမီမီကို